I-NetworkManager 1.32 ifika ngeNkxaso yokuBheka i-DNS, iiFixes, kunye nokunye | Ubunlog
I-NetworkManager 1.32 ifika kunye nenkxaso yokujonga kwakhona i-DNS, ukulungiswa kunye nokunye
Ubumnyama | 20/06/2021 22:02 | software
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yojongano kubhengezwe ukwenza lula ukumiselwa kweeparameter zenethiwekhi, NetworkManager 1.32 Kwaye kule nguqulo intsha, ukongeza kulungiso lwebug, sinokufumana amanqaku amatsha, eyona inomdla kakhulu kukukhetha i-backwall yolawulo lomlilo.
Kulungiselelwe abo bangaqhelekanga kwiNethiwekhiManager kufuneka bayazi ukuba this sisixhobo sesoftware se lula ukusetyenziswa kothungelwano Iikhompyutha Kwi-linux kunye nezinye iinkqubo ezisebenza kwi-Unix. Esi sixhobo ithatha indlela yokungenelela ekukhetheni inethiwekhi, ukuzama ukusebenzisa olona qhagamshelo lufumanekayo xa ukuphuma kwemeko, okanye xa umsebenzisi ehamba phakathi kwenethiwekhi engenazingcingo.
1 Iimpawu ezintsha eziphambili zeNethiwekhiManager 1.32
1.1 Uyifumana njani iNethiwekhiManager 1.32?
Iimpawu ezintsha eziphambili zeNethiwekhiManager 1.32
Kule nguqulo intsha sinokuyifumana Isakhono sokukhetha i-firewall yolawulo lwasemva sinikezelwe, apho ukhetho olutsha longezwe kwi-NetworkManager.conf. Ngokungagqibekanga, "i-nftables" backend iqulunqwe kwaye xa kungekho fayile kwinkqubo kwaye iptables ikhona, i-backend yangasemva iya kuba "iptables".
Ukongeza, nayo uqaphele ukuba ukubanakho ukwenza i-DNS lookups ebuyiselweyo kubonelelwe ngayo ukumisela igama lomamkeli ngokusekwe kwigama le-DNS elichazwe kwidilesi ye-IP ebonelelwe kwinkqubo. Imowudi yenziwe isebenzise ukhetho lwegama lenginginya kwiprofayili. Ngaphambili, igama le-getnameinfo () lalibizelwa ukumisela igama lenginginya, elithathela ingqalelo useto lwe-NSS kunye negama elichaziweyo kwi / etc / hostname.
Singayifumana loo nto utshintsho lwenziwe kwi-API Akufanele zichaphazele ukuhambelana neeplagi ezikhoyo. Umzekelo, ukuphathwa kwePropertiesChanged token kunye no-D-Bus ubunini, obuye bancitshiswa ixesha elide, kuyekisiwe.
Ithala leencwadi le-libnm lifihla iinkcazo zesakhiwo kwi-NMSimpleConnection, NMSetting, nakwiiklasi zeNMSetting. Ifomathi "uqhagamshelo.uuid" isetyenziswa njengesitshixo esiphambili sokuchonga iprofayili yonxibelelwano.
Ukhetho olutsha "i-ethtool.pause-autoneg", "ethtool.pause-rx" kunye ne "ethtool.pause-tx" ziye zongezwa ukwazisa ukulibaziseka xa kuthunyelwa okanye kusamkelwa izakhelo ze-Ethernet.
Ipharamitha ye "ethernet.accept-all-mac-address" yongezwa ukuvumela iadaptha yenethiwekhi ukuba ingene kwimowudi "yokuziphatha kakubi" ukuhlalutya izakhelo zenethiwekhi ezingakhange zibhekiswe kwinkqubo yangoku.
Yongeze inkxaso yeendlela zolawulo
Ukuziphatha malunga nemithetho yolawulo lwezithuthi itshintshiwe: Ngokuzenzekelayo, iNethiwekhiManager ngoku igcina imigaqo ye-qdiscs kunye neefilitha zendlela esele zilungisiwe kwinkqubo.
Ukuphindaphindwa kwenethiwekhi ngaphandle kwenethiwekhi ngaphandle kweefayile zoqwalaselo ze-iwd.
Inkxaso eyongeziweyo yokhetho lwe-DHCP 249 (iMicrosoft Classless Static Route).
Inkxaso eyongeziweyo yeparameter yekernel "rd.net.dhcp.retry", elawula isicelo sedilesi ebophelelayo
Uhlengahlengiso olukhulu lwekhowudi yemithombo lwenziwe.
Okokugqibela, eweNdifuna ukwazi ngakumbi ngayo ungayenza kwikhonkco elingezantsi.
Uyifumana njani iNethiwekhiManager 1.32?
Kulungiselelwe abo banomdla wokukwazi ukufumana le nguqulo intsha Kuya kufuneka uyazi ukuba ngalo mzuzu azikho iiphakeji ezakhelweyo Ubuntu okanye ezinye izinto eziphuma kuzo. Ke ukuba ufuna ukufumana olu hlobo Kuya kufuneka bakha kwikhowudi yabo yomthombo.
Nangona ingumbandela weentsuku ezimbalwa ukuba ubandakanywe kwindawo yokugcina esemthethweni Ubuntu bayo yokuhlaziya ngokukhawuleza.
Ke ukuba uyafuna, linda uhlaziyo olutsha ukuze lwenziwe lufumaneke ngaphakathi kwamajelo aseburhulumenteni e-Ubuntu, Ungajonga ukuba uhlaziyo sele lukhona kwi eli khonkco.
Ngokukhawuleza emva kokuba oko kwenzekile, unokuhlaziya uluhlu lwakho lweephakeji kunye neepos kwindlela yakho ngoncedo lomyalelo olandelayo:
Kwaye ukufaka ingxelo entsha yeNethiwekhiManager 1.32 kwinkqubo yakho, sebenzisa nje nayiphi na le miyalelo ilandelayo.
Hlaziya kwaye ufake zonke iipakeji ezikhoyo
Hlaziya kwaye ufake kuphela umphathi wenethiwekhi:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » I-NetworkManager 1.32 ifika kunye nenkxaso yokujonga kwakhona i-DNS, ukulungiswa kunye nokunye
Iveki ezolileyo ekhokelele kwi-Linux 5.13-rc7 eqhelekileyo yenza ukuba sicinge ukuba kuyakubakho ingxelo ezinzileyo ngeCawa ezayo
Ifotoxx, faka lo mhleli wesithombe kunye nomphathi wokuqokelela kwi-Ubuntu 20.04